Sida loo qaabeeyo jaldiga hore iyo gadaal ee buuggaaga | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo qaabeeyo jaldiga hore iyo gadaal ee buuggaaga
Haddii aad halkan ka timid, waxaa laga yaabaa inay tahay laba sababood: maxaa yeelay waxaad tahay qoraa waadna rabtaa nashqadee daboolka buugga inaad hada qortay; ama maxaa yeelay waxaa lagaa codsaday naqshadeeye ahaan daboolida buugga oo runti ma ogid sida loo dhigo mashruucan.
Si kastaba ha noqotee, howshu waa sahlan tahay, laakiin waxaa jira dhinacyo qaar oo ay tahay in la tixgeliyo si looga fogaado inay ku dhacaan khaladaad ama guuldarooyin taas oo hadhow, marka buugaagta la daabaco, ay tahay naqshad (iyo waqti) lagu lumiyo. Ma rabtaa inaan kaala hadalno arrintaas?
1 Jeldiga buugga
2 Xogta lagama maarmaanka u ah daboolka buugga iyo daboolka dambe
3 Naqshadeyso jeldiga hore iyo dambe ee buuggaaga
3.1 Samee daboolka hore iyo gadaal si gooni gooni ah
3.2 Adeegso barnaamijyo habboon
3.3 Isha ku hay cabirka
3.4 Sawirro iyo farbarasho waafaqsan buugga
Jeldiga buuggu malaha waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee halkaa ka jira. Maskaxda ku hay in akhristayaashu badanaa aysan u istaagin inay arkaan buugaagta ku yaal dukaanka buugaagta, laakiin taa badalkeeda ay diirada saaraan kaliya kuwa soo jiidanaya dareenkooda. Waana halka uu daboolka ka galo.
Tani Waa inay soo jiidasho ku filan tahay in qofku, markuu arko, uusan ka caawin karin inuu ka soo qaado buugga oo aad u falanqee. Si kale haddii loo dhigo, jeldiga buuggu waa aragtida ugu horraysa ee aad ku yeelanayso akhristaha.
Sidaa darteed, waa muhiim in la bixiyo fiiro gaar ah u leh faahfaahinta si loo helo set la aqbali karo. Waana in lagu gartaa:
La xiriir buugga gudihiisa: ma dhigi kartid dabool xirmo haddii sheekadaadu ay ku saabsan tahay eeyaha.
Noqo mid cad oo la fahmi karo: haddii aad meel madow ku dhigto asalka cad, dadku ma ogaan doonaan waxa buuggaagu tilmaamayo, nooca suugaaneed ee ay noqon karto, wayna ka boodi doonaan.
Dhammaan xogta buuggu ma leeyihiin dabool: oo waa maxay xogtu? Waan ka faalloon doonnaa xagga hoose.
Xogta lagama maarmaanka u ah daboolka buugga iyo daboolka dambe
Jeldiga iyo jeldiga dambe ee buuggaaguba waa inay wataan waxoogaa macluumaad ah ee ku soo noqnoqda dhammaan buugaagta, iyo in la iska indhatiro waxay noqon kartaa khatar (maxaa yeelay way kala duwan yihiin, way diidi karaan inay iibsadaan).
Xagga jeldiga, xogta ay tahay inay lahaato waa: magaca qoraaga iyo cinwaanka buugga. Ma jiraan wax intaa ka badan. Waxaa jira dad badan oo sheekooyinka ka dhiga subtitles ama weedho, laakiin runtii waxaad u baahan tahay oo keliya labadaas qaybood ee macluumaadka ah.
Magaca qoraagu waa sababta oo ah waa inaad cadeysaa cidda qortay (waa kuma qofka sheekadaas ka dambeeya) iyo cinwaanka si aad awood ugu yeesho ciddii ku aragta nooca buuggaasi koobayo.
Ka waran hadday tahay daboolka dambe? Halkan waxaa ku jira waxyar oo xorriyad ah, laakiin guud ahaan waxay ka kooban tahay: dulucda sheekada, barcode oo ay la socoto ISBN ee buugga, iyo ikhtiyaar ahaan, taariikh nololeedka qoraaga.
Dulucda buuggu waa muhiim, wuxuu soo koobi doonaa sheekada lagu sheegay dhexdeeda, ha ahaato mid khayaali ah ama mid aan male-awaal ahayn. Intaa waxaa sii dheer, lambarka ISBN (oo wakiil ka ah barcode) ayaa lagama maarmaan u ah inuu awood u leeyahay inuu jir ahaan u iibiyo buugaagta.
Ugu dambeyntii, taariikh nololeedka qoraaga, tani waa ikhtiyaari. Waxaa jira kuwa go'aansada inay dhigaan iyo kuwa u adeegsada mid ka mid ah bogagga gudaha inay sameeyaan.
Naqshadeyso jeldiga hore iyo dambe ee buuggaaga
Hadda oo aan kuu sheegnay muhiimadda ay leedahay wajiga hore iyo gadaasha dambe ee buuggaaga, iyo sidoo kale xogta ay tahay inaad ku darto mid kasta oo ka mid ah, waxaa la joogaa xilligii la bilaabi lahaa qaabeynta. Laakiin sida loo sameeyo?
Samee daboolka hore iyo gadaal si gooni gooni ah
Waxaan kugula talineynaa inaad si gooni ah u sameyso. Taasi waa, waxaad abuureysaa feylal muuqaal ah oo ah daboolka iyo mid kale oo ah daboolka dambe.
Tanina waa sababta oo ah, haddii aad ku soo rarayso dijital ahaan, uma baahnid dabool dambe, laakiin waa inaad keliya dhigtaa daboolka buugga. Haddii aad labadiinaba mid uun sawir leedihiin, uma muuqan doono fiicni oo waxaad bixin doontaan sawir xun.
Adeegso barnaamijyo habboon
ka barnaamijyada ay tahay inaad u adeegsato si aad u sameyso waa barnaamijyada tafatirka sawirka, maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa inaad isku darto, isku darto oo aad dib u xajiso sawirka iyo qoraalka (qoraaga magaciisa iyo cinwaankiisa) si wax walba loo qaabeeyo oo tayo lehna loo daabaco. Hadaad ku sameyso barnaamij aan aheyn sixid muuqaal, tayada waa "xumaaneysaa" oo markay tahay daabicista si fiican uma soo bixi doonto.
Haddii aadan ku fiicnayn, waxaa fiican inaad kireysato khabiir. Waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad u qurux badan oo burburin kara iibka buuggaaga, kumana ciyaari kartid agtiisa. Laakiin haddii aad khabiir tahay, ama aad ku fiican tahay, ka hor sii soco.
Isha ku hay cabirka
Waxaan kugula talineynaa, markaad sameysid jaldiga hore iyo gadaal, inaad sameyso iyada oo ku saleysan cabirka ay tahay inaad dhameystirto, taasi waa, hore, lafdhabarta iyo daboolka dambe. Internetka waxaad ka heli kartaa tusaalooyin tan ku saleysan xajmiga buuggaaga, haddii uu leeyahay fallaadho iyo in kale. Adiga ayaa kugu hagi kara iyaga ka dibna qayb walba u qaybin kara. Intaa waxaa dheer, sawirada waa in lagu helaa tayada iyo cabirka ugu fiican. Way fiicantahay in la isticmaalo kuwa waaweyn oo laga dhigo kuwo ka yar kan ka soo horjeedka, kuwaas oo pixelated.
Sawirro iyo farbarasho waafaqsan buugga
Had iyo jeer isku day inaad dooratid sawirada iyo noocyada noocyada kala duwan ee la jaan qaadaya nooca buugga. Hadday suurtagal tahayna, waxay wax ku leeyihiin sheekada; tan iyo markaas qofka arkaa wuxuu awoodi doonaa inuu ogaado waxa ay tahay kaliya isagoo fiirinaya sawirka.
Haa, iskuday inaadan culeyska saarin daboolka. Khubaradu waxay ku talinayaan in aan ka badnayn 3 nooc oo noocyada farta ah la isku dhafo inta u dhexeysa daboolka hore iyo gadaal, iyo in sawirka ama muuqaalka sawirka uusan aad u qurxin maxaa yeelay waxay ku siin kartaa diidmo (ama dareenka ah inuu fowdo yahay oo uusan fahmi doonin buugga) ). Mararka qaarkood wax yar ayaa ka badan kiisaskaas.
Guud ahaan, marka la qorsheynayo jaldiga buugga iyo gadaashiisa dambe, waxa ugu horrayn laga hormarin lahaa waa hal-abuurnimo iyo muuqaallo. Waxay kuxirantahay nooca, waa inaad doorataa hal nooc oo dabool ah ama midkale, taasina waxay kuu horseedi doontaa inaad hesho fasiraad kala duwan. Taladayada ayaa ah inaad sameyso dhowr dabool oo aad tijaabiso. Marka waad garan kartaa midkood kan ugu saxan sheekadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida loo qaabeeyo jaldiga hore iyo gadaal ee buuggaaga
Sida looga saaro bogagga PDF qalabkan bilaashka ah
Calaamado asli ah